သတင်းထူးများ – Page 21 – PwintsSan
Han Ye Seul ရဲ့မှားယွင်းသွားခဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်အကြောင်း အိတ်သွန်ဖာမှောက်ဝန်ခံလာတဲ့ ဆရာဝန်
April 23, 2018 twl 0
Han Ye Seul ရဲ့ lipoma (ခေါ်) အဆီကျိတ်ကို ခွဲစိတ်ရတဲ့ဆရာဝန်ဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့အမှားအတွက် ၀န်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်က မင်းသမီးဖြစ်သူ Han Ye Seul ဟာ သူမရဲ့အဆီကျိတ်ကိုခွဲစိတ်မှု ချို့ယွင်းခြင်းရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်ခဲ့ကြပြီး တောင်းပန်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသလို […]
ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ ဒေါ်လှရီရဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ဦး၏ မာန၊ မိခင်တစ်ဦး၏ သတ္တိ
‘‘အိမ်ထောင်ရေးကို အရှုံးပေးလိုက်ရပေမယ့် အလုပ်ကိုတော့ အရှုံးမပေးပါဘူး’’ဟု ပြောလာသူမှာ အသက် (၅၅)နှစ်အရွယ် ဒေါ်လှရီပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လှရီ သည် လူသာမန်တို့ မရောက်လို၊ မနေလိုသည့် နေရာတစ်ခုတွင် သားသမီးများ နှင့်အတူ နေထိုင်ရင်း တော်ရုံယောက်ျား တစ်ယောက်ပင် မလုပ်လိုသည့် အလုပ်ဖြင့် နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါး အသက်မွေးခဲ့သူဖြစ်သဖြင့် ထိုစကားကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ […]
ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဆွမ်းကပ်ရန်လာသည့် လင်မယားအား ဆယ်ကျော်သက် ၃ ဦးက ဓားဖြင့်ထိုးပြီး လုယက်မှု ဖြစ်ပွား
—— ကျော်ကျော်- မလိူင်(အကုန်သိသတင်းဌာန) ——- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဆွမ်းကပ်ရန် ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့် လင်မယားအား အသက် ၁၄ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် လူငယ် ၃ ဦးမှ ဓားဖြင့်ထိုးပြီး လုယက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီလ ၂၁ ရက်၊ နံနက် […]
ကောင်းလိုက်တာမှ ပြောမပြတတ်အောင်ကို ကောင်းတာပါ..
ကောင်းလွန်းလို့မျှဝေပါသည်။ မကျွေးချင်ရင်မပြပါနဲ့ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ဖြစ်သည် ကျောင်းသူတစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသားတစ်ဦး စကားပြောနေသည်ကို ဆရာမ ဘေးမှခြောင်းပြီး နားထောင်နေသည်။ ကျော်ကျော်ရေ ။ဒီမှာကြည့်ပါ့အုံး။ ငါ့အိမ်ကပေးလိုက်တာ။ ပန်းသီးတစ်လုံး။ အရမ်းစားလို့ကောင်းမှာပဲဟဲ့ ။” ငါ့ကိုလဲ တခြမ်းကျွေးပါ့လား ။ မြင့်မြင့်ရယ် ။ ငါလဲ စားချင်လို့ပါ ။ အောင်မှာ ဘာလို့ကျွေးရမှာလဲ […]
အဆိပ်တွေစားနေတဲ့ ကိုယ်တို့ ရွှေမြန်မာတွေ
….. ….. ….. ….. ….. …. …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ……
သူမ မဝင်ရဲခဲ့သော အိမ်
April 22, 2018 twl 0
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၆ ရက်နေ့ တောင်ကိုရီးယား- ဘူချွန်းမြို့ ( Bucheon, Gyeonggi-do,South Korea ) အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ တံခါးပိတ်ထားတဲ့ အိမ်အရှေ့မှာကြောက်လန့် အားငယ်စွာ ရပ်နေပါတယ်။ သူမဟာ ကြောက်လွန်းလို့ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ရင်နေတယ်…။ အိမ်ထဲကို […]
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အရာ (၃၀)
ဂဏန်းတွက်စက်တွေ၊ နှိုးစက်နာရီတွေနဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေလို တစ်မျိုးတည်းသုံးထုတ်ကုန်တွေဟာ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အစားထိုးခံခဲ့ရသလို ဖုန်းအားသွင်းကြိုးတွေ၊ ကြိုးပါတဲ့ နားကြပ်တွေကလည်း wireless မော်ဒယ်တွေကြောင့် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်နေပါပြီ။ သတင်းစာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ မြေပုံတွေဟာလည်း ဒီဂျစ်တယ်ဘက်ကို ကူးပြောင်းနေကြပါပြီ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အရာ (၃၀) ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း […]
မန်းေ​လး​ဆေးရုံကြီးတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ကို ​ကြောက်​လှပါပြီ
အ​ဖေ​ဆိုင်​ကယ်​Accident ဖြစ်​လို့​ခေါင်းထိသွားတယ်​။မိုးကုတ်​(ကျပ်​ပြင်​)​ဆေးရုံက ​ ဆရာမကြီးက​ခေါင်းဓာတ်​မှန်​ကိုကြည့်​ပီး မသင်္ကာလို့​​ဆေးစာ​​ရေး​​ပေးပီး မန်း​လေး(ငြိမ်း)ကို Ct scan ဆိုလားရိုက်​ဖို့ ​ချက်​ခြင်းဆင်းခိုင်းပါတယ်​။ ည(12)နာရီ မန်း​လေး​ရောက်​လို့ ငြိမ်း​ဆေးခန်းကိုတန်းဝင်​တယ်​။ အဲ့ဒီ(ငြိမ်း)​ဆေးခန်းက Accidentဆိုပီး မကု​ပေးနိုင်​ဘူးဆိုပီး $​ရေးကိုလှည့်​မလုပ်​ဘူး အာ့နဲ့​ဆေးရုံကြီးကို​ပြေး​ရတယ်​။ ​ဆေးရုံကြီး​ရောက်​​တော့အကျိုးအ​ကြောင်း​ပြောပြ​တော့ ဓာတ်​မှန်​ပြန်​ရိုက်​ခိုင်းတယ်​။ ဓာတ်​မှန်​အ​ဖြေကိုကြည့်​ပီး အဲ့ဆရာဝန်​က ရီ​တောင်​ရီ​သေးတယ်​ ဘာမှမဖြစ်​ဘဲလာလို့တဲ့။ အ​ဖေကို […]
အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာ နည်းပညာ ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ စထောင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ကလေး အများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ဖုန်း၊တက်ဘလက်များ ကို ဂိမ်းဆော့ရင်း၊Youtube ကြည့်ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေကြပေမဲ့ ဒီဖိလစ်ပိုင်မှ ၁၀ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်လို Code တွေရေးသားရမယ်၊ဘယ်လို Website တွေကို ဖန်တီးရမလဲဆိုတာ သင်ယူခဲ့ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ သူမဟာ အသက် ၁၀ […]
သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင် လိင်စိတ်ကြွဆေးများ မရောင်းကြပါနဲ့
စုံတွဲများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပစ္စည်းလုယက်မှုတွေဟာ နေရာဒေသ အတော်များများမှာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ် ..။ ပစ္စည်းလုယက်ခံ အချို့စုံတွဲများဆိုလျင် အသက်ကိုပါ ပေးဆပ်လိုက်ရတယ် ..။ လူငယ်သဘာဝ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံတာ အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ .. အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလို့ ပြောပြတာကိုတော့ နားလည်စေချင်တယ် ..။ မန္တလေး၊ မိတ္ထီလာ၊ စဉ့်ကိုင်၊ တံတားဦး၊ […]